Injineerrada ajaaniibta ee dalka ku sugan oo ey haysato shaqo la'aan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Jaamiciyiin cashar ku jirta. Sawirle: Eva Dalin
Injineerrada ajaaniibta ee dalka ku sugan oo ey haysato shaqo la'aan
La daabacay onsdag 4 september 2013 kl 12.24
Waa in shaqa-bixiyeyaashu ka waantoobaan fikirka oranaya iney baahi ka jirto aqoonta luuqaddooda sidii loo shaqaaleeyn lahaa jaamiciyiinta ka soo jeedda dalka dibaddiisa, sida uu qabo qorshe tacliineed loogu magac-darey "korta vägen - dhabbo gaaban". Midkaasina oo muddo aan badnayn lagu guuleeystey in lagu shaqaaleeyo jaamiciyiin ajaaniib ah. Maria Hellsén, oo ka mid tahay howl-wadeennada jaamicadda Istockholm ee ku howlan qorshaha "dhabbada gaaban":
(- Tira-koob ayaa lagu ogaadey in jaamiciyiinta asal ahaan ka soo jeedda dalka dibaddiisa ey ku qaadato muddo toddoba sannadood ah sidii ey shaqo ku heli lahaayeen, halka qorshaha ”dhabbada gaaban” uu ku soo koobayo middaa laba sannadood illaa iyo laba sannadood iyo bar.
Jaamiciyiin dhan 370 ayaa guud ahaan dhigtey kooraska muddad lixda bilood ah lagu qaadanyo jaamicadda Istockholm laga bilaabo sannakii2010.
57 tiradaa ka mid ah oo kooraskoodii dhameeysatey bishii feebaraayo ee sannadkan ayey 30 ka mid ah, qiyaastii tiro bar ka badan ey ku howl bilaabeen xirfado sarreeya bilowgii xilliga kuleeylaha.
Qorshaha "dhabbada gaaban - Korta vägen" ayuu ku wajahan yahay jaamiciyiinta ajaaniibta ah ee wax ka soo baratey jaamicado dalka dibaddiisa ku yaala ugu yaraan saddex sannadood, ku sugnaayeen Iswiidhen ugu yaraan muddo saddex-sannadood ah, isla-markaana xoogaa aqoonin ah u leh luuqadda iswiidhishka. Wax-barashadan ayaa laga soo dalbadaa xafiisyada hayadda suuqa shaqada oo aanu kharash ku bixin. Iyadoona kolka ruuxa loo qaato wax-barashada la ballaarineyo aqoontiisa tacliineed, isla-markaana la siiyo aqoon-kororsi dheeraad ah ee aqoontiisa lagu buuxineyo, sida ay sheegtay Maria Hellsén:
- Muddada tacliinta lagu jro ayey dhammaan ardeydu dhigtaan tacliin la xiriirta suuqa shaqada, culuunta bulshada, culuun la xiriirta luuqadda iswiidhishka – iyada oo dhammaan tacliinta lagu dhigto luuqadda iswiidhishka iyo aqoon-kororsi la xiriira culuunta kombiyuutarrada. Kooraska ayey ardeyda badankood soo wada barteen dhaqaalaha iyo injineeriyada.
Gaar ahaan ayay dalkan Iswiidhen ka jirtaa baahi la xiriirta injineerrada iyo dad xirfad u leh howshaa, waana mid kor u si kaceeysa. Dhanka kale waxaa dalka maanta ku sugan injineero ajaaniib ah oo shaqo-la’aan ku sugan oo tiradoodu gaarsiisan yihiin 4 000, iyada oo qorshahan ”dhabbada gaaban” caqabad lagala kulmey sidii injineerrada loogu heli lahaa goobo tababar ey ku qaataan ee goobaha shaqada.
Mararka qaarkood ayaa lagu andacoodaa in jaamiciyiinta ajaaniibta uu hooseeyo aqoontooda la xiriirta luuqadda iswiidhishka, hase yeeshee maaha middaasi sabab la qaadan karo, sida ay qabaan howl-wadeennada qorshaha ”dhabbada gaaban”. Sal-dhigga tacliinta ayaa ah mid laga siman yahay, waana in shaqa-bixiyeyaashu joojiyaan iney luuqadda ka dhigtaan sabab aaney u howl-gelin karin jaamiciyiinta ajaaniibta, sida ay sheegtay madaxa qorshaha Lovisa Fältskog Johansson mar ay ka qeyb qaadatay seminaar ka dhacay Almedalen kuleeylihii.
Dhabbada ugu fudud ee suuqa shaqada lagu galo waxay tahay iyada oo xarummaha shaqada laga helo goobo tababar lagu qaato, sida ay sheegtay Maria Hellsén oo ka howl-gasha jaamicadda Istockholm:
- Waxaa ugu daran in ruuxu dalka yimaado oo aanu xiriir ballaaran la lahyn bulshada, qaasatan dadyoowga ka howl-gala goobaha xirfadda shakhsiga. Sidaa daraadeed ayay taageero ugu noqonaysaa jaamicadda Istockholm inay goob tababar u hesho. Iyo suurtagal leh bilow wanaag-san ee la xiriira xirfadda shakhsiga.